Mid Kamid Ah Qoraayaasha Ugu Caansan Soomaalida Oo Geeriyooday | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Mid Kamid Ah Qoraayaasha Ugu Caansan Soomaalida Oo Geeriyooday
Mid Kamid Ah Qoraayaasha Ugu Caansan Soomaalida Oo Geeriyooday
Sh. Cabdiraxmaan Xuseen Samatar *Abuu Xamsa* (1936 – 2018)
Wuxuu ahaa qoraa, tarjume, qareen, aqoonyahan, baare, caalim diineed, sharci yaqaan iyo barre; dadka inta badan yaqaanna waxa ay ku naaneysi jireen “Maktabaddii Soomaaliyeed” mugga aqoontiisa iyo joogteynta akhriskiisa awgeed.
Dunida ayuu kusoo biirray dabshidkii 1936-kii, sida diiwaankiisa ku qoran, shaqooyin kala duwan ayuu soo qabtay, se howsha ugu badan ee noloshiisa uu ku qaatay waa qoridda buugaagta iyo tarjumidda dhigaallada afafka qalaad ku qoran oo uu af soomaali usoo waaridayay.
Shaqadiisa qoraal aad ayeey u guda balaarneyd, ku dhowaad 40-dhigane ayuu afafka Soomaaliga iyo Carabiga ku qoray, “Saaxiib Kasbo”, “Dhaaf Walbahaarka” “Fanka Maamulka” “Hogaaminta Wanaagsan” iyo buugaag kale ayaa ahaa kuwii uu fursadda u helay in uu afka hooyo ku qoro.
Carabiga ayaa ahaa luuqad kale oo uu awooday in uu si fudud qoraalladiisa ugu gudbiyo, “Islaamka & Hormarka Bulshooyinka” (Carabi) la daabacay sannadkii 1984-kii; iyo buugaag kale ayaa la xusuustaa in uu qoraaga luuqadda Carabiga ku qoray.
Qareen u dooda arrimaha qaxootiga, islamarkaana dhallinyarada ka wacyi geliya tahriibta ayuu ahaa si kale haddii loo dhigo, dhowr jeer oo kale duwan ayuu kusoo shaqeeyay sharci yaqaannimada, oo wuxuu kamid ahaa golaha adeegga garsoorka.
Axad 4-ta Maarso 2018, ayeey tii rabbi u timid, wuxuu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, ka dib xaalad caafimaad oo uu halkaas u joogay muddooyinkii u dambeeyay; ka Shaaciye ahaan waxa aan qoyska, ehellada, qaraabada, asxaabta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadayneynnaa geerrida ku timid qoraa Soomaaliyeed Sh. Cabdiraxmaan Xuseen Samatar oo loo yaqaannay “Abuu Xamsa” waxaanna rabbi uga baryeynaa in uu jannadii Fardowso ku soorro oo kitaabkiisa Midigta ka siiyo.